Shenzhen BoRun Electronics Co., LTD faragalin waxyaabaha iibinta iyo soo saarka si xor ah iin qaybo iyo sancada markii muddo tan iyo taariikhda shixnad. Muddo hal sano ah waxaan ku siin doonaa adeega dayactirka ee lacag dheeraad ah si iibsadaha. Dhamaan fasaxyada waa sax ahayn haddii item celin ama wax soo saarka la helay in ay si qaldan, lagu xadgudbay, xoqo, qaldan, mislabeled, dib u habaynta ama beddeli si kasta ama keena nooc ka mid ah musiibooyinka dabiiciga ah.
Dhanka kale, 7 maalmood ka dib dhalmada gudahood, waa la heli karaa si ay u soo celin ama waxyaabaha sarrifka haddii wax dhibaato ah oo tayo leh.
In damaanad - mid ka mid Year
Dhamaan waxyaabaha ku soo laabtay la cusboonaysiiyey doonaa free of shaqada iyo hawsha wax sida shayga ama alaabta waa waqtiga damaanadda gudahood (marka laga reebo sharci darro ah ay waxyeello). In this kharashka marka la eego maraakiibta la wadaagi doonaan labada dhinac.
Out of damaanad
Out-of-damaanad item ama alaabta for adeegga dayactirka la qiimayn doonaa by RSC ah (Xaqiijinta Adeegga RMA) kharashka lagu qiyaasay qaybo iyo shaqada.
Macaamiisha waa in ay heshiis ka soo laabtay xamuulka of item cusboonaysiiyey ama wax soo saarka by "Ex-shuqullada" Ereyga maraakiibta Warshadda our ee Shenzhen Shiinaha. (Labada dhinacba maraakiibta kharashka ka masuul by macaamiisha u noqon doonaa.)